Olaantummaa Seeraa Cabsaa, Olaantummaa seeraa kabachiisuun hin Danda’amu! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooOlaantummaa Seeraa Cabsaa, Olaantummaa seeraa kabachiisuun hin Danda’amu!
(Ibsa KDHSLO-Caamsaa 6,2021)
Lammiileen Oromiyaa Biyya isaanii Oromiyaa irratti mirga jiraachuu, mirga nageenyummaa qaamaa, mirga bilisummaa, mirga jireenya dhuunfaa isaanii kabajamuu fi eegamuu, mirga bakkaa bakkatti socha’uu fi dirqama seeraa fi heera biyyattii kabajuu fi kabachiisuu akka qaban heera mootummaa federaalaa dimookiratawaa Itiyoophiyaa keeyyata 14,15,16,17,26 fi 32 tumameera. Kana malees namni tokko yoo shaakkame ajaja mana murtii irraa barreeffamee fi ragaa poolisa ta’uu isaa mirkaneessu qabatee sa’a 6 A.M hanga 6 P.M to’annoo jala olchuu danda’a.
Yeroo to’atu kanattis mana jireenyaa nama to’atamee sakatta’uuf ajaja mana murtii qabaachuun dirqama yoo ta’u, yeroo sakatta’iimsa gaggeessan sa’a itti eegalanii hanga xumuraatti tuquun bakka ragooleen taajjabbii jiranitti waan mana shakkamaa keessaa argame yoo jiraate galmeessuun tajjabdoonni ilaalaa turan akka mallattessuu qaban seerrii adeemsa falmii yakkaa biyyattii keewwata 32 fi 33 kan dirqisiisuu dha.
Osoo kana ta’uu qabuu Ebla 1,2021 mana Hayyu Duree ABO Obbo Dawud Ibsaa sababa qubsaa fi ajaja mana murtii tokko malee waraanni eenyuun akka ajajamee fi dirqama eenyu irraa akka fudhate hin beekamne Hayyu Duree ABO Obbo Dawud Ibsaa akka mana isaanii keessaa gad bahuu hin dandenyee fi namni kamiyyuu ol seenuu akka hin dandeenye uggaramanii jiraachuu isaanii ifatti gaaffii fi deebii gaafa 30/04/2021 miidiyaa OMN irratti darbe irratti dhageenye.
Kun kanaan osoo jiruu Caamsaa 3,2021 manni jireenya Hayyuu Duree ABO Obbo Dawud Ibsaa halkan kessaa sa’a 2:40 (8:40 PM) irratti qaama hin beekamneen manni jireenya isaanii rukutuun akka balbala banan gaafatan. Eegdonni Obbo Dawud Ibsaa qaama dhufee balbala rukutu waan hin barreef akkasumas yeroo malee waan ta’eef balbala jalaa banuu didan. Sa’a tokkoo ol mooraa mana jireenyaa isaanii rukutuun jalaa banuu didnaan balbala mooraa cabsuun humnaan itti seenuun rebbichaa fi sakkata’insa irraan gahuun olantummaa seeraa cabsanii jiru.
Biyya seerri jira jedhamu keessatti hoggana paartii boordii filannoon galmaa’ee jiru tokko yeroo malee mana jireenyaa sakatta’uu fi namoota mana jireenyaa isaanii keessa jiraatan daa’ima waggaa shanii (5) dabalatee reebichaa fi shororkaa irraan gahuun, keessumaa qaamni seera kabachiisa jedhu Olaantummaa seeraa cabsuu isaa ifatti agarsiisee jira. Kana ilaalchisuun ragaa qabatamaa vedio ”Nuuf birbadhaa’’ jedhu sabaa himaalee addaa addaa irratti gad lakkifamee jira. Borumtaa isaas caamsaa 4,2021 obboroo qaamni eenyumman isaa hin beekamne uffata civiliin mooratti ol seenuun Qondaala ABO kan ta’an Dargaggoo Waaqoo Noolee fi eegdota Obbo Dawud Ibsaa kan ta’an Dargaggoo Ismaa’eel Lamuu (Qeerroo) fi Dargaggoo Yunus Alii(Saalvaakir) kan jedhaman qabanii deemaniiru.
Qaama Olaantummaa seeraa cabsaa, Olaantummaa seeraan kabachiisa jedhu KDHSLO kan balaaleffatu ta’uu ibsaa; taateen caamsaa 3,2021 mooraa mana jireenyaa Obbo Dawud Ibsaa irratti raawwate Lammiilee Oromiyaa irratti akka hin raawwaanne waamicha goona.
Mirgi Lammiilee Oromiyaa haa kabajamu!